नेपालीले बनाएको नर्वेको ट्रेल ! - ParyatanBazar.com
नेपालीले बनाएको नर्वेको ट्रेल !
पर्यटन बजार१० मंसिर २०७८, शुक्रबार मा प्रकाशित
मंसिर १०, बीबीसी । धेरै मानिसहरुलाई बाहिरी भर्‍याङ (गोरेटो सडक) निर्माणमा नर्वे विश्वकै सबैभन्दा अगाडि छ भन्ने थाहा छैन । र, यससँगै अर्को तथ्य हो काठ र ढुङ्गाले उत्कृष्ट रुपमा इन्जिनियर गरिएका ती कलात्मक भर्‍याङ अत्यन्तै अप्ठेरा ठाउँमा नेपालका शीपवान शेर्पाहरुले निर्माण गरेका हुन् । तिनै भर्‍याङले नर्वेका अति सुन्दर ‘भ्युप्वाइन्ट’ सम्म पुग्न मानिसहरुलाई सम्भव बनाइदिएको छ ।
जस्तै धेरै उचाइमा पर्ने एक प्रख्यात हिमाली ताल देखिने ठाउँसम्म पुग्न कुनै समय असम्भव ठानिएको थियो । बाटोहरु जुनसुकैबेला भत्किन सक्ने जस्ता देखिन्थे । त्यसैले मानिसहरु माथि चढ्दा तल हेर्नै सक्दैनथ्ये । तर अहिले त्यही बाटो हुँदै पर्यटकहरुले चिन्तामुक्त रुपमा सुन्दर प्रकृतिको आनन्द उठाउन सक्ने भएका छन् ।
अर्को त्यस्तो ठाउँ हो प्रेइकेस्टोलन जुन २०१९ मा नर्वेको सबैभन्दा बढी हाइक जाने ट्रेल बन्न पुगेको थियो । र यो ठाउँमा माथि पुग्दा भन्दापनि त्यहाँ जाने बाटोको धेरै चर्चा हुने गर्दछ । त्यहाँ ढुङ्गाले बिछ्याइएका अति सुन्दर भर्‍याङहरु पनि आकर्षणका केन्द्र बनेका छन् ।
र वास्तवमै त्यहाँका भर्‍याङमा ऐतिहासिक सुन्दरता छ । किनकि विगत दुई दशकदेखि नेपाली शेर्पाहरुले प्रेइकेस्टोलनजस्ता झन्डै ३०० अन्य प्राकृतिक ढुङ्गाले बनाइएका भर्‍याङ सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरिसकेका छन् ।
नत्र त्यस अघिसम्म नर्वेका पहाडहरुमा एकदमै कम स्थानीय मात्र पुग्न सक्थ्ये । तर सामाजिक सञ्जालले धेरै कुरा बदल्यो । र अहिले प्रेइकेस्टोलन नर्वेको शीर्ष गन्तव्य मध्येको एकमा परेको छ जहाँ ‘शेर्पा स्टेयर्स’ नाम दिइएको भर्‍याङ नै भर्‍याङको ट्रेल अधिक चर्चामा आइरहेको छ ।
अझ कोभिड महामारीले सिमाना बन्द भएकाले पनि देशवासीहरु स्थानीय ठाउँ नै खोजिखोजि घुमिरहेका छन् । त्यसैले पनि शेर्पा पथ नै अफ्ठेरा ट्रेलसम्म मानिसहरुलाई पुर्‍याउन सबैभन्दा उत्तम समाधान बन्न पुगेको छ ।
अन्य हाइकिङ स्थल भन्दा विपरीत ती ट्रेलले दुर्घटना कम गर्नुका साथै पहिरो जानबाट समेत जोगाउँछन् । त्यसैले यसलाई अत्यन्तै सुरक्षित बाटो ठहर्‍याइएको हुँदा पर्यटकहरुका लागि पनि यसले नौलो र आनन्ददायक अनुभव दिलाइरहेको छ । त्यसैगरी अर्को राम्रो पक्ष भनेको यो जति पुरानो भएपनि कमजोर हुँदैन ।
यत्तिका वर्षसम्म ती कलात्मक भर्‍याङका ट्रेलहरुले ‘आउटडोर’ भ्रमणलाई पहुँच दिलाउनुका साथै र दीर्घकालीन बनाउन पनि मद्दत गरिरहेका छन् ।
‘द शेर्पा स्टेयर्स’ ले नै नर्वेमा बाहिरी भ्रमणलाई सम्भव गराएको नर्वेइयन ट्रेकिङ असोसिएसनका ट्रेल सल्लाहकार टोरगेर नर्गार्ड पनि बताउँछन् । उनले भने, “धेरै पर्यटकहरु आउने ठाउँका लागि यो नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । यसले प्रकृतिको अनुभव लिन धेरै सहज बनाइदिन सक्छ ।”
यसको सुरुवात गर्ने ६० वर्षीय ट्रेल निर्माण कम्पनीका मालिक, जिएर भेटीले यो काममा शेर्पाहरुलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने उपाय २० वर्ष अगाडि सपनामा देखेको बताउँछन् ।